သံလိုက်ဝက်အူဗန်း - အမည်မသိနှင့်လက်တွေ့တူရိယာ | အခမဲ့ hardware
ဣဇာက်သည် | 09/09/2021 09:00 | အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများ
များစွာသောလူများသည်အလွန်မသိသောကြောင့်၎င်းသည်ဤတူရိယာကိုလုံးဝသတိမပြုမိကြပေ။ ဒါပေမယ့်သင်ကသေးငယ်တဲ့ screw နှစ်ခု (သို့) အခွံမာသီးတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရင်မင်းအလုပ်ရုံထဲမှာအများကြီးအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ ဤအတူ သံလိုက်ဝက်အူဗန်း မင်းသူတို့ကိုဘယ်တော့မှဆုံးရှုံးမှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့ပရောဂျက်ကိုစဖွင့်တဲ့အခါမင်းတစ်ယောက်ပျောက်နေလို့နောင်တရစရာမလိုဘူး။
ဒါတွေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ပါ သတ္တုအပိုင်းအစများသည်အလွန်သေးငယ်သည် သူတို့ကလမ်းပျောက်သွားတာဘဲ၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုရပ်တန့်စေမယ့်ဒီတူရိယာနဲ့မင်းရဲ့ fastons များ, ဝက်ဝံစတာတွေကိုမင်းလက်ထဲမှာအမြဲရှိနေလိမ့်မယ်။
una သံလိုက်ဗန်း ဝက်အူများအတွက်၎င်းသည်အများအားဖြင့် corrosion ခံနိုင်သောသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောမြို့ပတ်ရထားသို့မဟုတ်လေးထောင့်ဗန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို၎င်း၏အောက်ခြေ၌ထည့်သွင်းထားသောသံလိုက်အားဖြင့်၎င်းသည်သင်လိုအပ်သောနေရာ၌အစဉ်အမြဲရှိနေပြီး၎င်းတို့သည်အပျောက်မခံနိုင်အောင်အပိုပစ္စည်းများ (သံခွံများ၊ မူလီများ၊ …) နှင့်သတ္ထုကိရိယာများကိုပူးတွဲထားရှိလိမ့်မည်။
ထို့အပြင်၎င်းတို့တွင်အများအားဖြင့်ကာကွယ်မှုပါဝင်သည် ၎င်း၏အခြေစိုက်စခန်းတွင်ရာဘာအမြဲတမ်းသံလိုက်ပါ ၀ င်သောနေရာဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်အလွယ်တကူလျှော။ အနေအထားကိုထိန်းမထားနိုင်ပါ။ ဒါကြောင့်အိမ်သုံးစားပွဲကနေ workbench၊ ကားဂိုဒေါင်စတာတွေကိုမျက်နှာပြင်အမျိုးအစားအားလုံးမှာသုံးနိုင်ပါတယ်။
ဤ tool အမျိုးအစားကိုသုံးခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ၎င်းကိုထုတ်လုပ်သူများနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးများစွာအတွက်သုံးနိုင်သည်။ ကွန်ပျူတာသုံးပစ္စည်းများပြုပြင်သည့်ဆိုင်များအပါအ ၀ င်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးများအတွက်သုံးနိုင်သည်။ disassembly နှင့်စုဝေး အသင်း၏ ဗန်းကိုမျက်နှာပြင်တစ်ခုပေါ်တွင်တင်ထားရုံနှင့်သင်မပျောက်ကွယ်သွားစေလိုသောသတ္တုအပိုင်းအစအားလုံးအတွင်း၌ထားခဲ့ပါ။
ဒါကြောင့်မင်းသူတို့ကိုရလိမ့်မယ် အမြဲတမ်းမျက်မြင်မင်းသူတို့ကိုအလုပ်ခွင်ထဲကပြုတ်ကျတာဒါမှမဟုတ်လမ်းပျောက်တာကိုမင်းကာကွယ်ပေးလိမ့်မယ်။ ထုတ်လုပ်ခြင်းမပြုတော့သောအဟောင်းများသို့မဟုတ်ထူးခြားသောအပိုင်းများနှင့်ပတ်သက်လျှင်အထူးအရေးကြီးသည်။
သင်တစ် ဦး ဝယ်လိုလျှင် စျေးသက်သာသောသံလိုက်ဗန်းဤအကြံပြုချက်များကိုသင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
စတုဂံပုံသံလိုက်ဗန်း 230x130 မီလီမီတာ.
ခိုင်ခံ့သော ၁၅ စင်တီမီတာအချင်းသံလိုက်ပန်းကန်လုံး.
၁၅၀ စင်တီမီတာအချင်းရှိသော stainless steel tray.
အချင်း ၁၅၊ ၁၁ နှင့် ၇.၅ စင်တီမီတာရှိသောသံလိုက်ပန်းကန်လုံး ၃ လုံး.
သံလိုက်ဓာတ်ကိရိယာဘားမရ။ ၎င်းကိုအလုပ်ရုံအတွက်ရော၊ မင်းရဲ့သတ္ထုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုနံရံမှာရော၊ မီးဖိုချောင်သုံးတွေ၊ ဓားတွေအတွက်ရောသုံးနိုင်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ » အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများ » သံလိုက်ဝက်အူဗန်း - အမည်မသိနှင့်လက်တွေ့တူရိယာ
Micrometer: ဒီ tool အကြောင်းသင်သိဖို့လိုအပ်သမျှ